Flaxseed Oil 1000mg - Megafit Nutrition
Home Shop Flaxseed Oil 1000mg
အမျိုးအမည်နံပါတ : 000-06.
အမျိုးအစားများ: ငါးကြီးဆီနှင့် Omegas, နှမ်းကြတ်စေ့ဆီ။.
သဘာဝအတိုင်းသန့်စင်သော Omega 3, 6,9အဆီဓာတ်များ ထောက်ပံ့ပေးသည်
နှလုံးသွေးကြောစနစ်နှင့် အာရုံကြောစနစ်ကျန်းမာရေးကို ပံ့ပိုးပေးသည်
နာမကျန်းမှုကို တိုက်ဖျက်ပေးသော ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သည့် ခန္ဓာကိုယ်မှ အလိုလျောက်တုံ့ပြန်ပေးမှု၊ ခုခံအားစနစ်နှင့် အစာချေစနစ်များကို ပံ့ပိုးပေးသည်
အရေအတွက် : 100
ဆေးညွန်း : 1000 မီလီဂရမ်
Flax Seed Oil from MegaFit Nutrition isaOmega 3-6-9 Plant Based Supplement. Flax Seed oil my help with Lowering cholesterol, reduce inflammation, cardiovascular health and promoteahealthy immune system. Flax Seed oils also helps maintain healthy, hair, skin and nails. Flax oil isagreat alternative for people who want to receiveapure plant - based compounds that are also found in fish oil with the worry of heavy metals.